संसदमा मिनेन्द्र रिजालले सोधे–एमालेले कहिले लोकप्रिय मत प्राप्त गर्या हो ? – Sajha Post
साझापोस्ट	१३ जेठ २०७९ १६:२७
काठमाण्डौ । नेकपा एमालेको दावी छ कि स्थानीय चुनावमा उसले जनताको लोकप्रिय मत पाएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि चुनावी विजयसभाहरुमा एमालेका नेता कार्यकर्ताले यही दावी गरिरहेका छ । शुक्रवार संसदमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरलले पनि यही दावी गरे । उनले भने–‘नेकपा एमाले नेपाली जनताको लोकप्रिय मत प्राप्त गर्दै पहिलो पार्टी बनेको छ म यो कुरा जानकारी गराउन चाहान्छु । ’
संसदको रेकर्डमै पोखरेलले यस्तो दावी गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छन । आप्नो तर्फबाट संसदमा तथ्याङ्क पेश गर्दै उनले एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको दावीलाई झुटो सावित गर्ने प्रयास पनि गरे ।‘ नेपाली कांग्रेसले ३२८ पालिकाको नेतृत्व गर्छ । २ हजार ६ सय ५८ वडाको नेतृत्व गर्छ ।’ रिजालले भने– लोकप्रिय मतकै कुरा गर्ने हो भने पनि सबैभन्दा भरपर्दो मानक वडाध्यक्षले पाएको मत हो । कांग्रेसले ३४.३ प्रतिशत मत पाएको छ । तपाईंको पार्टीले ३३ प्रतिशत मत पाएको छ । अब हारेपछि पनि खुट्टो माथि छ भन्न खोजेको हो भने त्यतिसम्म ठीकै छ । ’
त्यतिमात्रै होईन उनले २०१६ सालदेखि कांग्रेस र कम्यूनिष्टले पाएको मतको फेहरिस्त सुनाए । ‘हामीले लोकप्रिय मतको लामो कथा सन्यौं । ०१६ सालमा कांग्रेसको ३७. २ र कम्युनिष्टको ७. २ थियो । ०४८ मा कांग्रेसको मत ३९.५ थियो, एमालेको २९ प्रतिशत मत थियो । ०५१ मा कांग्रेस लार्जेष्ट पार्टी थिएन, तर कांग्रेसको ३४. ५ प्रतिशत र एमालेको ३१.९ मत थियो । ’
रिजालले एमालेले कहिले पनि लोकप्रिय मत नपाएको, टर्च बालेर खोजे पनि नभेटिने टिप्पणी गरे । ‘०५६ मा कांग्रेसको ३७.२ र एमालेको ३१.६, ०६४ मा कांग्रेसको २२.४ र एमालेको २१.४ थियो । माओवादी हामी भन्दा ज्यादो थियो । ०७० मा कांग्रेसको २९.८ र एमालेको २७.६ प्रतिशत मत थियो, पछिल्ला दुई चुनावको कुरा गरियो । अनि ईतिहासको कुन कालखण्डमा लोकप्रिय मत प्राप्त गर्या हो । टर्च बालेर हेर्नुपर्छ, टर्च बालेर हेर्दा पनि भेटिन्न । ’ रिजालले पोखरेलको दावीलाई कुण्ठा मात्रै भनेनन हार स्वीकार्न नसकेको अभिव्यक्ति भनिदिए । ‘कुण्ठा नपोख्नोस हार स्वीकार्नुस ।’ रिजालले एमालेलाई भने ।
गगन थापा लक्षित झलनाथको टिप्पणी – आज चार पाटा मुडियोस् भन्नेहरु कहाँ छन् ?
रामकुमारी झाँक्रीलाई रुवाएर समाजवाद आउँदैन – रामचन्द्र पौडेल